Ajaanib ku dhimatay shil ka dhacay Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka naga soo gaaraya degmada Dacar Buluq ee Somaliland ayaa waxa ay sheegayaan in dad Ajaanib ah ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay degmadaasi sidda ay sheegeen Ciidanka Booliska Somaliland.
Inta la xaqiijiyay Shilkaasi waxaa ku dhintay laba ruux oo u dhashay dalka Bangaladesh & laba ruux oo Soomaali ah, kuwaasi oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa gaariga Shilka galay.
Afhayeenka Booliska Somaliland Faysal Xiis ayaa sheegay Shilkaasi inuu sabab u ahaay wadihii gaariga, balse dadkii dhintay uu ka mid noqday.
“Shilkaasi waxaa sababay darawalkii gaadhiga waday, Afar qof ayaa ku dhimatay oo laba Bangaladhesh u dhalatay, labana Somaliland yihiin, waxaa kale oo ku dhaawacmay 10 ruux oo Afar Bangaladesh yihiin lixna Somali, durbadiiba Ciidamada Booliska ayaa u gurmaday Shilkaasi.” Ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Booliska Somaliland.
Afhayeenka ayaa sheegay in gaariga oo ku socday si xowli ah oo uu hal mar Gadoomay, islamarkaana ay ku dhinteen dadkaasi oo isugu jira Muwaadiniinta iyo Ajaanib ka shaqeynaysay.